ကွောငျကလေးရဲ့သခငျမလေးက ဘယျသူဖွဈမလဲ ?
HomeKnowledgeကွောငျကလေးရဲ့သခငျမလေးက ဘယျသူဖွဈမလဲ ?
မိသားစု အတျောမြားမြားက အိမျမှာကွောငျမှေးတာကို သဘောကပြါတယျ။ ကွောငျလေးတှကေ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ခွလေေးခြောငျးသတ်တဝါ ဖွဈရုံသာမက ကလေးတှရေဲ့ သူငယျခငျြးကောငျးလေးတှလေညျး ဖွဈကွပါတယျ။
ကွောငျလေးတှနေဲ့ ကလေးတှေ ဆော့နတောလေးတှကေ ခဈြစရာ ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကွောငျပိုငျရှငျလေးက ဘယျသူဖွဈနိုငျမလဲ?? ။ ဒီပဟဠေိလေးက ပွောပွပေးပါလိမျ့မယျ။
ပုံထဲမှာ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ကောငျမလေး ၃ ယောကျ ရှိပါတယျ။ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ကွောငျလေးတဈကောငျက မိနျးကလေး ၃ ယောကျရှမှေ့ာ ကစားနပေါတယျ။ ကွောငျလေးရဲ့ပိုငျရှငျက မိနျးကလေး ၃ ယောကျထဲက တဈယောကျပါ။ ဘယျသူပါလိမျ့နျော? ။
ပဟဠေိတှကေ နညျးနညျးတော့ အငွငျးပှားစရာတှပေါပဲ။ ပုံလေးတဈပုံကို ကွညျ့ပွီး ပိုငျရှငျကို ဘယျလိုခနျ့မှနျးကွမလဲ?? ။ ပုံလေးကို အနီးကပျကွညျ့ရငျတော့ အဖွတှေမေ့ယျ ဆိုတာ အာမခံပါတယျ။ သသေခြောခြာကွညျ့ကွညျ့နျော။
ကွောငျပိုငျရှငျလေးကို သိပွီလား?? ။ ကွောငျပိုငျရှငျလေးကတော့ အလယျက မိနျးကလေးပါ။ ပုံကိုပွနျကွညျ့လိုကျတဲ့ အခါ မိနျးကလေးရဲ့ ခေါငျးစညျးကွိုးနဲ့ ကွောငျလေးရဲ့ လညျစီးလေးနဲ့က တူပါတယျ။
အလယျမှာ ရပျနတေဲ့ မိနျးကလေးက ဆံပငျတဈဖကျပဲ စညျးထားပွီး ခေါငျးစညျးကွိုးကို ကွောငျလေးကို ပေးလိုကျတယျလို့ ခနျ့မှနျးနိုငျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အလယျက မိနျးကလေးနဲ့ ကွောငျလေးက အရမျးခဈြကွတဲ့ သူငယျခငျြးတှဖွေဈကွောငျး သိနိုငျပါတယျ။ ဒီပဟဠေိလေးကိုဖွပွေီး ပြျောရှငျသှားမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
ကြောင်ကလေးရဲ့သခင်မလေးက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ?
မိသားစု အတော်များများက အိမ်မှာကြောင်မွေးတာကို သဘောကျပါတယ်။ ကြောင်လေးတွေက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ခြေလေးချောင်းသတ္တဝါ ဖြစ်ရုံသာမက ကလေးတွေရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းလေးတွေလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။
ကြောင်လေးတွေနဲ့ ကလေးတွေ ဆော့နေတာလေးတွေက ချစ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြောင်ပိုင်ရှင်လေးက ဘယ်သူဖြစ်နိုင်မလဲ?? ။ ဒီပဟေဠိလေးက ပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။
ပုံထဲမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်မလေး ၃ ယောက် ရှိပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကြောင်လေးတစ်ကောင်က မိန်းကလေး ၃ ယောက်ရှေ့မှာ ကစားနေပါတယ်။ ကြောင်လေးရဲ့ပိုင်ရှင်က မိန်းကလေး ၃ ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ပါ။ ဘယ်သူပါလိမ့်နော်? ။
ပဟေဠိတွေက နည်းနည်းတော့ အငြင်းပွားစရာတွေပါပဲ။ ပုံလေးတစ်ပုံကို ကြည့်ပြီး ပိုင်ရှင်ကို ဘယ်လိုခန့်မှန်းကြမလဲ?? ။ ပုံလေးကို အနီးကပ်ကြည့်ရင်တော့ အဖြေတွေ့မယ် ဆိုတာ အာမခံပါတယ်။ သေသေချာချာကြည့်ကြည့်နော်။
ကြောင်ပိုင်ရှင်လေးကို သိပြီလား?? ။ ကြောင်ပိုင်ရှင်လေးကတော့ အလယ်က မိန်းကလေးပါ။ ပုံကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ မိန်းကလေးရဲ့ ခေါင်းစည်းကြိုးနဲ့ ကြောင်လေးရဲ့ လည်စီးလေးနဲ့က တူပါတယ်။
အလယ်မှာ ရပ်နေတဲ့ မိန်းကလေးက ဆံပင်တစ်ဖက်ပဲ စည်းထားပြီး ခေါင်းစည်းကြိုးကို ကြောင်လေးကို ပေးလိုက်တယ်လို့ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အလယ်က မိန်းကလေးနဲ့ ကြောင်လေးက အရမ်းချစ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီပဟေဠိလေးကိုဖြေပြီး ပျော်ရွှင်သွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။